Waxing vs Shaving! ဘယ်နည်းကပိုကောင်းတာလည်း? | CosmeticMyanmar
Home » Article » Waxing vs Shaving! ဘယ်နည်းကပိုကောင်းတာလည်း?
Waxing vs Shaving! ဘယ်နည်းကပိုကောင်းတာလည်း?
ရာသီဥတုက အောက်တိုဘာလကုန်တောင် မအေးနိုင်သေးတော့ ဘောင်းဘီတို၊ ဂါဝန်လက်ပြတ်လေးတွေကိုပဲအားကိုးနေရတာအမှန်ပါနော်။ ဒီလိုအတိုအပြတ်လေးတွေ ဝတ်ပြီဆိုရင်လည်း ခြေထောက်တွေ၊ချိုင်းတွေက ရှင်းပြီးလှနေမှဆိုတော့ shaving ပဲလုပ်ရမလား waxing ပဲလုပ်သင့်သလားဆိုတာ အမြဲဒွိဟဖြစ်စေတာမို့ Shaving vs Waxing ရဲ့အားသာချက် အားနည်းချက်လေးတွေဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
Shaving ကတော့ အလွယ်ကူဆုံး၊ နာကျင်မှုအနည်းဆုံးနဲ့ ငွေကုန်လည်းအသက်သာဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဘလိတ်ဓါး ဒါမှမဟုတ် razor လေးတွေအသုံးပြုပြီး ခြေထောက် ဒါမှမဟုတ် ချိုင်းမှာရှိတဲ့အမွှေးတွေကို အရေပြားပေါ်မှာမမြင်ရတော့သလောက်အနေအထားရောက်အောင် ရိတ်လိုက်တဲ့သဘောဖြစ်တာကြောင့် အမွှေးလေးတွေကို အမြစ်ကနေတော့မဖယ်ပေးပါဘူးနော်။ ဒါကြောင့် shaving လုပ်တုန်းကမပါဘဲကျန်ခဲ့တဲ့ အရေပြားနားက ပေါက်ခါစအမွှေးလေးတွေက ဆက်ပြီးထွက်လာတာမို့ waxing ထပ်တော့မြန်မြန် regrow ဖြစ်တာပါ။
Waxing ကတော့ အမွှေးလေးတွေကိုအမြစ်ကနေဆွဲနှုတ်လိုက်တဲ့နည်းဖြစ်လို့ စစချင်းမှာတော့နာကျင်တာပါ။ အိမ်မှာ ကိုယ့်ဟာကိုယ် waxing လုပ်လည်းရသလို ဆိုင်တွေမှာလုပ်လည်းရတဲ့နည်းဖြစ်ပြီး shaving လောက်ခဏခဏလုပ်စရာလည်းမလိုပါဘူး။ ပြန်ထွက်လာတဲ့ အမွှေးလေးတွေကလည်း ပိုပြီးမကြမ်းတော့ပြန်ပေါက်တာကြောင့် တစ်လကို နှစ်ခါလောက်ပုံမှန်လုပ်ပေးရုံနဲ့တင်လုံလောက်ပါတယ်။
ဒီနည်းလမ်းနှစ်ခုမှာ ဘယ်နည်းကပိုကောင်းလည်းဆိုရင် မင်မင်ကတော့ အချိန်ရပြီး ကိုယ့်အတွက်အပန်းမကြီးဘူးဆိုရင် waxing ကိုပိုညွှန်းပါတယ်၊ shaving လောက် ခဏခဏလုပ်စရာမလိုတဲ့အပြင် shaving လိုအမွှေးငုတ်စိလေးတွေခြေထောက်မှာကျန်ခဲ့လို့ ဘောင်းဘီအရှည် skinny လိုမျိုးဝတ်မိရင် စူးတာမျိုး၊ မညီမညာ shaving လုပ်မိလို့ ဟိုတစ်ကွက်ဒီတစ်ကွက်ပြန်ပေါက်လာတာမျိုး၊ ပိုကြမ်းသွားတာမျိုးမဖြစ်တော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် အကြံပေးချင်တာကတော့ တစ်လနှစ်ခါလောက် waxing လုပ်ပြီး ကိုယ်အရေးတကြီးလိုတဲ့အချိန်မှ shaving လုပ်ရင်အဆင်ပြေမယ်လို့အကြံပေးလိုက်ရပါတယ်။
Tags: articleBody Care